30,000 taonina famokarana zezika organika - YiZheng Heavy Machines Co., Ltd.
Ny tsipika famokarana isan-taona misy zezika biolojika 30.000 taonina dia ny fanovana ny karazana fako biolojika ho zezika organika amin'ny alàlan'ny fomba samihafa. Ny ozinina zezika biolojika dia tsy vitan'ny fanovana ny tain'akoho sy ny fako ho harena, miteraka tombony ara-toekarena, fa koa mampihena ny fandotoana ny tontolo iainana ary mamokatra tombony ho an'ny tontolo iainana. Ny endrik'ireo sombintsombiny dia mety ho varingarina na boribory, izay mora entina sy ampiasaina. Ny fitaovana dia azo voafantina arakaraka ny tena ilainao.
Manome ny famolavolana sy fanamboarana tsipika famokarana granulation buffer vaovao ho an'ny zezika organika izahay. Ny fitaovana famokarana dia misy hopper sy feeder, milina buffer vaovao, milina fanamainana, milina sieve roller, fantsom-bary, conveyor fehikibo, milina fonosana ary fitaovana hafa fanampiny.
Harena voajanahary voajanahary manan-karena
Ny akora zezika biolojika dia manankarena amin'ny loharano, izay mizara ho ireto sokajy manaraka ireto. Ireo fitaovana samihafa dia azo ampifangaroina amin'ny fitaovana famokarana samihafa:
1. Fako-biby: toy ny akoho, kisoa, ganagana, omby, ondry, soavaly, bitro, sns, sisa tavela amin'ny biby, toy ny trondro, sakafo taolana, volom-borona, volom-borona, zezika, kankana biogas, sns.
2. Fako fambolena: mololo volo, rattan, sakafo soja, sakafo voadio, sakafo vita amin'ny landihazo, sakafo melon landy, vovoka masirasira, ambin'ny holatra sns.
3. Fako indostrialy: slurry divay, sisa tavela amin'ny vinaingitra, residin'ny mangahazo, fotaka sivana, residue fanafody, hodi-bozaka, sns.
4. Vovon-tanàna: fotaka renirano, fotaka, fotaka tatatra, fotaka an-dranomasina, fotaka farihy, asidra humika, turf, lignite, fotaka, lavenona manidina sns.
5. Fako ao an-trano: fako ao an-dakozia, sns.
6. Diksionera na fitrandrahana: fitrandrahana ahidrano, fitrandrahana trondro, sns.
1. Crusher fitaovana mando semi-wet dia ampiasaina hanamboarana azy bebe kokoa amin'ny atin'ny hamandoan'ny akora.
2. Ny masinina fanosotra sombin-javatra dia mahatonga ny haben'ny sombin-javatra boribory mitovy, malefaka ny etona ary avo ny tanjaka. Mety amin'ny fampifandraisana amin'ny granulator isan-karazany.
3. Ny tsipika famokarana iray manontolo dia ampifandraisin'ny conveyor fehikibo sy ireo fitaovana hafa mpanohana.
4. firafitra mifangaro, fampisehoana marin-toerana, fandidiana sy fikojakojana mety.
5. Ny fitaovana dia azo nofidina araka ny tena ilainao.
Ny fizotrany dia misy kojakoja fanamasinana, mixer, milina fanangonam-bolo, fanamainana, cooler, milina sieve roller, silo, milina fonosana mandeha ho azy, crusher mitsangana, conveyor fehikibo, sns ... fanamasinana → fampifangaroana ireo akora (mifangaro amin'ny akora biolojika-tsy organika hafa, NPK≥4%, zavatra biolojika ≥30%) → granulation → fonosana. Naoty: io tsipika famokarana io dia ho an'ny referansa ihany.
1. Dumper amponga
Ny fizotran'ny fermentation dia mamotika tanteraka ny fako biolojika ho lasa masaka sy masaka. Ny plugs samihafa toy ny dumpers mandeha an-tongotra, ny dumpers roa-helix, ny plugs groove, ny dumper hydraulic alikaola ary ny dumpers voahitsaky ny orinasanay dia azo fidiana arakaraka ny akora, toerana ary vokatra azo avy amin'ny zezika.
2. Masinina manorotoro
Ny akora masirasira dia mivezivezy ao anaty grinder mitsangana, izay afaka manapotika ireo akora misy rano latsaky ny 30%. Ny haben'ny sombiny dia mety hahatratra ny baiko 20-30, izay mahafeno ny fepetra takiana amin'ny granulation.
3. Mpangaro mifangaro
Aorian'ny fanorotoroana dia ampio ny fitaovana fanampiana arakaraka ny raikipohy ary afangaro tsara ao anaty blender. Ny mixer marindrano dia misy safidy roa: mixeur uniaxial sy mixeur-axis roa.
4. Granulator zezika organika vaovao
Ny taham-pahavitrihan'ny masinina dia mihoatra ny 90%, izay mety amin'ny karazana endrika samihafa. Ny tanjaky ny tsiranoka dia avo kokoa noho ny granulation disk sy ny granulation an'ny amponga, ary ny tahan'ny boribory lehibe dia ambany noho ny 15%.
5. Mpanipy boribory
Ny milina boribory dia afaka manamboatra sy manatsara ny vongan-tsiranoka aorian'ny granulation. Aorian'ny fanesorana ny fizotran'ny granulation na ny disk, aorian'ny fanipazana boribory, ny zezika zezika dia mety hitovy habe, boribory marina, mamiratra sy malama eo amboniny, tanjaka lehibe ny zara, ary ny vokatra zezika amin'ny zezika dia mahatratra 98%.
6. Maina sy mangatsiaka
Ny cooler roller dia mampangatsiaka ny sombintsombiny amin'ny maripana sasany aorian'ny fanamainana, ary mampihena ny atin'ny potikan'ny rano indray rehefa mampihena ny maripana sombiny.
Ampiasaina indrindra izy io amin'ny fampisarahana ny vokatra vita amin'ny akora namboarina. Aorian'ny sieving, ny poti-kazo mahay dia ampidirina ao anaty masinina manify, ary ireo sombin-javatra tsy mendrika dia ampidirina ao anaty crusher rojo mitsangana mba hifehezana, ka hahatratrarana ny fanasokajiana ny vokatra sy ny fanasokajiana mitovy amin'ny vokatra vita. Ny masinina dia mandray efijery mitambatra, izay mora hitazomana sy soloina. Tsotra ny firafiny, mora ampiasaina ary malama. Mijanona, fitaovana ilaina amin'ny famokarana zezika io.
8. Masinina fonosana:
Ny firakotra ireo poti-kazo mahay amin'ny alàlan'ny milina fanosotra rotary dia tsy vitan'ny hoe mahatonga ny sombin-tarehy ho tsara tarehy, fa manatsara ny hamafin'ireo sombintsombiny. Ny milina fanosotra rotary dia mampiasa teknolojia fanodinana fantsona manokana sy teknolojia famafazana vovoka matanjaka mba hisorohana ny fanakanana ny sombin'ny zezika.
9. Masinina fonosana mandeha ho azy:
Aorian'ny firakotra ireo sombin-javatra, dia fonosin'ilay milina famonosana izy ireo. Ny milina fonosana dia manana automatique avo lenta, mampiditra lanjany, zaitra, fonosana ary fitaterana, izay mahatsapa fonosana be dia be ary mahatonga ny fizotran'ny fonosana hahomby sy marina kokoa.
10. conveyor fehikibo: